China 1.3T, 2.5T, 5T, 10T Steel Recess Magnet teo aloha ho an'ny mpanamboatra vatofantsika sy mpamatsy | Meiko Magnetics
Famerenana vy amin'ny andriamby teo alohadia namboarina tsara mba hanamboarana ireo vatofantsika mitaingina amin'ny lasitra eo anilany, fa tsy ny fialan-tsasatra nentim-paharazana teo aloha. Ny endrika semi-sphere sy ny lavaky ny srew eo afovoany dia manamora ny fanalana azy amin'ny tontonana beton rehefa manao demoulding. Feno 1.3T, 2.5T, 5.0T, 7.5T na karazana 10T izahay ho an'ny vatofantsika mitaingina habe samy hafa. Ny tombo-kase vita amin'ny gazy additonal dia ilaina ihany koa hampiasaina hihazonana ny vatofantsika mafy ao amin'ny lohan'ilay andriamby taloha.
Fahaiza-mitondra ny vatofantsika D d H Sokiro Hery
MG MG MG KG
Meiko Magnetics notazonina tao an-tsaina foana fa "ny fanavaozana, ny kalitao ary ny zavatra takian'ny mpanjifa no vato fehizoron'ny orinasa". Manantena izahay fa ny fahaizanay amin'ny fivorian'ny andriamby dia mahazaka ny hevitrao tsara kokoa. Azonao atao ny mahita eto daholo ny fepetra takiana mahazatra anao na ny rafitra magnetika namboarina.
Teo aloha: Neodymium Magnet tsy ara-dalàna miaraka amin'ny Black Epxoy Coating
Manaraka: 350KG, 900KG Loaf Magnet ho an'ny vy vy mialoha ny vy na ny fanakatonana ny gitara
1.3T Reseta andriamby
2.5T Manainga Vatofantsika vatofantsika
5T Magnet amin'ny fanondranana vatofantsika
Famerenana andriamby teo aloha
Famerenana vy amin'ny andriamby teo aloha